Yiziphi, zakhiwa kanjani nezinhlobo zamagagasi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yiziphi, zakhiwa kanjani nezinhlobo zamagagasi
Sonke siyathanda ukuya olwandle futhi sijabulele isimo sezulu esihle, sishiswe yilanga futhi sigeze kahle. Kodwa-ke, ngezinsuku ezinomoya onamandla, amagagasi asivimbela ekuthatheni lelo bhati eliqabulayo. Impela wake wacabanga ukuthi lawo magagasi angenamkhawulo angapheli kanjani, kepha awazi ukuthi kungani noma ayini amagagasi ngempela.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ayini amagagasi olwandle nokuthi akhiwa kanjani?
1 Yini igagasi?
3 Izici ezihilelekile ekwakhiweni kwayo
4 Enye indlela yokukhiqiza
5 Izinhlobo zamagagasi
Igagasi limane nje liyisiqhuma samanzi esiphezu kolwandle. Bayakwazi ukuhamba amakhilomitha amaningi olwandle futhi, ngokuya komoya, zikwenza ngejubane eliphakeme noma eliphansi. Lapho amagagasi efika ogwini, aphula aqede umjikelezo wawo.
Yize kuvame ukucatshangwa ukuthi amagagasi abangelwa isenzo somoya, lokhu kudlulela phambili. Umkhiqizi wangempela wegagasi akuyena umoya, kepha yiLanga. YiLanga elishisa umoya woMhlaba, kepha ayikwenzi kufane yonke indawo. Okusho ukuthi, izinhlangothi ezithile zomhlaba ziyashisa ngokwenziwa yiLanga kunezinye. Uma lokhu kwenzeka, ingcindezi yasemkhathini iqhubeka ishintsha. Izindawo lapho umoya ufudumala khona, ingcindezi yasemkhathini iphakeme futhi kudalwa izindawo zokuzinza nesimo sezulu esihle, lapho kutholakala khona ama-anticyclone. Ngakolunye uhlangothi, lapho indawo ingashisi kangako kusuka eLangeni, ingcindezi yasemkhathini iphansi. Lokhu kubangela ukuthi imimoya yakhele ngendlela engaphansi kwengcindezi.
Amandla omoya womkhathi asebenza ngendlela efanayo naleyo yamanzi. Uketshezi, kulokhu umoya, uvamise ukuya kusuka lapho kunengcindezi eyengeziwe eya lapho kuncane khona. Uma kukhulu umehluko kwingcindezi phakathi kwenye indawo nenye, kulapho umoya uvunguza futhi uyoholela ezivunguvungwini.
Lapho umoya uqala ukuvunguza futhi uthinta kakhulu ubuso bolwandle, izinhlayiya zomoya zigudla izinhlayiya zamanzi namagagasi amancane aqala ukwakheka. Lawa abizwa ngamagagasi ama-capillary futhi awamane nje amaza amancane kuphela ngamamilimitha ambalwa ubude. Uma umoya uphelela ebangeni elingamakhilomitha ambalwa, amagagasi e-capillary akhula abe makhulu futhi aholele kumagagasi amakhulu.
Izici ezihilelekile ekwakhiweni kwayo
Kunezici eziningana ezingabeka isimo ekwakhiweni kwegagasi nosayizi walo. Ngokusobala, imimoya enamandla yenza amagagasi aphezulu, kodwa kufanele futhi sicabangele isivinini namandla wempepho kanye nesikhathi esihlala ngaso ngejubane elizinzile. Ezinye izinto ezibeka ukwakheka kwezinhlobo ezahlukahlukene zamagagasi indawo ethintekile nokujula. Lapho amagagasi esondela ogwini, ahamba kancane ngoba kukhona ukujula okuncane, kuyilapho iqonga lenyuka ngokuphakama. Inqubo iyaqhubeka kuze kube yilapho indawo ephakanyisiwe ihamba ngokushesha kunengxenye yangaphansi kwamanzi, lapho ukunyakaza kuzinza khona futhi igagasi liphuka.
Kukhona ezinye izinhlobo zamagagasi aphansi futhi ayindilinga akhiwa ngokwehluka kwengcindezi, izinga lokushisa nosawoti wezindawo eziseduze. Lo mehluko wenza ukuthi amanzi anyakaze futhi akhiphe imisinga eyakha amagagasi amancane. Lokhu kubizwa amagagasi olwandle ngemuva.
Amagagasi avame kakhulu esiwabona olwandle ngokuvamile anawo ubude obuphakathi kwamamitha ayi-0,5 no-2 nobude obuphakathi kwamamitha ayi-10 nangu-40, yize kunamagagasi angafika kumamitha ayi-10 no-15 ukuphakama.
Enye indlela yokukhiqiza
Kunenye inqubo yemvelo nayo ebangela ukwakheka kwamagagasi futhi akuwona umoya. Imayelana nokuzamazama komhlaba. Ukuzamazama komhlaba yizinqubo zokwakheka komhlaba, okuthi uma zenzeka endaweni yasolwandle, zenze amagagasi amakhulu abizwa ngama-tsunami.
Lapho ukuzamazama komhlaba kwenzeka ngaphansi kolwandle, ushintsho olungazelelwe olwenzeka ebusweni lubangela amagagasi amakhulukhulu wamakhilomitha ukuthi akhiqizwe azungeze leyo ndawo. La magagasi ahamba ngesivinini esisheshayo olwandle, ifinyelela ku-700km / h. Lesivinini singafaniswa nesendiza yendiza.
Lapho amagagasi olwandle ekude nolwandle, amagagasi ahamba amamitha ambalwa ukuphakama. Yilapho isondela ogwini lapho iphakama phakathi kwamamitha ayi-10 kuye kwangama-20 ukuphakama futhi iyizintaba zamanzi eziyiqiniso ezithinta amabhishi futhi zidale umonakalo omkhulu ezakhiweni ezizungezile nakuzo zonke izingqalasizinda ezisendaweni.
Ama-tsunami adale izinhlekelele eziningi kuwo wonke umlando. Ngalesi sizathu, ososayensi abaningi bacwaninga izinhlobo zamagagasi akha olwandle ukuze enze ugu luphephe futhi, ngaphezu kwalokho, bakwazi ukusebenzisa amandla amakhulu akhishwa kuwo ukukhiqiza ugesi njengenqubo evuselelekayo.
Kunezinhlobo eziningana zamagagasi ngokuya ngamandla nokuphakama anakho:
Amagagasi amahhala noma ahambayo. Lawa ngamagagasi atholakala ngaphezulu futhi ngenxa yokuhluka kwezinga lolwandle. Kuzo amanzi awaqhubeki, achaza kuphela ukujika lapho wehla wenyuka cishe endaweni efanayo lapho kuphakama khona igagasi.
Amagagasi okuhumusha. La magagasi enzeka ngasogwini. Njengoba ziqhubekela phambili, zithinta olwandle futhi zigcine sezishayeka ogwini, zakha amagwebu amaningi. Lapho amanzi ebuya futhi i-hangover iyakheka.
Amagagasi aphoqelelwe. Lokhu kukhiqizwa isenzo esinobudlova somoya futhi kungaba phezulu kakhulu.
Njengomphumela wokufudumala kwembulunga yonke, izinga lolwandle liyakhuphuka futhi amagagasi azolimaza kakhulu ugu. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukwazi okuningi ngangokunokwenzeka mayelana namandla wegagasi ukwenza ogwini lwethu indawo ephephile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Yiziphi, zakhiwa kanjani nezinhlobo zamagagasi
Izitshalo zivezwa kakhulu yiqhwa ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu